FJKM Ankadifotsy MITADIAVA AN’I JEHOVAH AMIN’NY FO MADIO / Katekomena / Fampianarana / Accueil - FJKM Ankadifotsy
MITADIAVA AN’I JEHOVAH AMIN’NY FO MADIO03/10/2016 15:39
Betsaka ireo VATOMISAKANA antsika amin’ny fitadiavantsika an’Andriamanitra, mainka fa hitady Azy amin’ny FO MADIO. Azo antoka ny fitarihan’ny Fanahy Masina amin’izany fitadiavantsika Azy izany. Ka aza mora ketraka fa MITOZOA hatrany (MAZOTOA hatrany).
MITADIAVA AN’I JEHOVAH AMIN’NY FO MADIO
Ny Fivavahana Kristiana dia Fivavahana amin’Andriamanitra « MANAMBARA NY TENANY » (Religion au Dieu Révélé). Noho izany dia AFAKA MAHITA an’Andriamanitra ny Kristiana. Koa raha manangana ity lohahevitra hoe « Mitadiava an’i Jehovah amin’ny fo madio » ity isika, dia MINO fa hahita Azy.
Tsy maintsy ambara etoana anefa fa MISY VATO MISAKANA izany Fitadiavana an’i Jehovah izany, mainka fa hitady Azy amin’ny FO MADIO izany.
Avy amin’ny tenanao
Marina tsara fa raha HITADY Azy ianao dia TSY LAVITRA, fa ao aminao ny OLANA (problème).
a) Ny fahotanao
Ny I Jaona 3.19-21, sy ny I Korintiana 4.4 dia manondro fa ny FANAMELOHAN-TENA manjo anao no misakana anao (culpabilité) manamelo-tena ianao.
b) Ny fieritreretanao (ta conscience)
Araraotin’ilay ratsy (devoly) izany fanamelohanao tena izany, dia asainy manenjika anao ny ERITRERITRAO. Sarotra ny « mandositra » an’io eritreritra io (cp Salamo 139)
d) Ny « tantaranao » (tes complexes)
Ny tsirairay dia samy nanana ny tantaram-piainany, amin’ny ankapobeny amin’ny maha olombelona antsika, dia TANTARA RATSY momba antsika ireny.
Fa satria EFA NITADY anao hatry ny ela ny Tompo, amin’izao ianao MBA MITADY AZY izao, dia TAFAHAONA amin’ilay Andriamanitra TIA ANAO ianao, ka miova ho tantara vaovao, tantara tsara ny fiainanao. (cp Genesisy 3.9)
Ny OLONA AKAIKY ANAO
a) Ny ankohonanao
– Ny ao an-trano
– Ny ray aman-dreny
– Ny rahalahy sy anabavy (na rahavavy sy anadahy)
– Ny zanaka sy ny vady
– Ny taninao (fomban-tany)
(cp Genesisy 12.1-3 ; Marka 10.28-30 ; Lioka 14.24-26)//Marka 6.4
a) Ireo namana (naman-dratsy, sipa…)
b) Mpiara-miasa (patron, prom)
Cf Hebreo 10.19-sns
Matoky isika fa TSY AVELAN’Andriamanitra hisy hahasakana antsika, toy ny tsy hisin’ny hahasakana Azy, mba HAHITANTSIKA Azy.
Fa hoy indrindra ny Tompo:
« SAMBATRA IZAY MADIO AM-PO FA IZY NO MAHITA AN’ANDRIAMANITRA » (cf Matio 5.8)
Izany hoe TENA MISY AVY AMINTSIKA izay MITADY AZY, ny mba ho madio am-po :
– Tsy misalasala (na matahotra) manatona sy mitady an’Andriamanitra, satria ny Tompo efa nilaza hoe : « …na zovy na zovy manatona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy » (cf Jaona 6.37)
– fantatsika fa TIA ANTSIKA Andriamanitra ka efa NITADY antsika ela Izy; « TAFAHAONA » aminy izay MITADY AZY » (cf Genesisy 3.9)
– « Aza mahafoy ny fiarahantsika MIANGONA…» (Hebreo 10.25)
(cp II Tantara 7.15-16 ;Jaona 4.19-24)
– « MAZOTOA mivavaka (sy mamaky ny Soratra Masina ) fa izany no mamaritra ny maha –Zanak’Andriamanitra anao.
Betsaka ireo VATOMISAKANA antsika amin’ny Fitadiavantsika an’Andriamanitra, mainka fa hitady Azy amin’ny FO MADIO. Azo antoka ny Fitarihan’ny Fanahy Masina amin’izany Fitadiavantsika Azy. Ka aza mora ketraka fa MITOZOA hatrany (MAZOTOA hatrany).